Abama-ambulensi bahlela ukudunga eye-Afcon | Isolezwe
Abama-ambulensi bahlela ukudunga eye-Afcon
Isolezwe / 22 January 2013, 2:03pm /
BASABISA ngokuphazamisa imidlalo ye-Africa Cup of Nations eThekwini abasebenzi bama ambulensi kahulumeni uma izikhalo zabo zamaholo namahora okusebenza zingalungiswa uNdunankulu wesifundazwe uDkt Zweli Mkhize.
Laba basebenzi abangaphansi kophiko i-Emergency Medical Rescue Services (EMRS) izolo bamashele emahhovisi kaNdunankulu, eMgungundlovu babeka umnqamlajuqu wezinsuku eziyisikhombisa ukuba baphendulwe, ngaphandle kwalokho bazokwenza iTheku lingalawuleki.
Kuzodlalwa imidlalo eyisithupha ye-Afcon enkundleni iMoses Mabhida, eThekwini. Abasebenzi bakhale ngomyalelo woMnyango wezeMpilo wokuba abanye abangu-58 bebuyisele emuva imali engu-R37 660 abayiholelwa ngephutha. Isolezwe linayo incwadi ebhalelwe omunye umsebenzi imyalela ukuba abuyisele le mali eMnyangweni.
Abasebenzi baphinde bakhala nangokungaholelwa imali yokwenza umsebenzi oyingozi, nokungayitholi imali yokusebenza amahora angeziwe.
Okunye abathe akubaphethe kahle ukusebenza amahora angu-173 esikhundleni sika-160.
UMnuz Sifiso Dlamini osamisiwe emsebenzini obedlulisela izikhalo zabo, ukubeke kwacaca ukuthi uma bengalandeleli kwabakhala ngakho, abasebenzi be-EMRS eThekwini nabo bazoba nemashi enkulu ezophaza-misa izinhlelo ze-Afcon.
Kuthintwa ophethe izindaba zokuhlelwa kwe-Afcon uMnuz Vusi Mazibuko, uthe uMnyango wezeMpilo ubaluleke kakhulu kulo mqhudelwano ngoba uyingxenye yokuhlelwa kwe-Afcon.
Le mashi obekuqhuma kuyo inhlamba ebibhekiswe ezikhulwini zoMnyango wezeMpilo iphazamise nokuhamba kwezimoto emgwaqeni omkhulu eMgungundlovu.
Izikhalo zabasebenzi zithathwe nguMnuz Vivani Made osebenza ehhovisi likaNdunankulu nothwale kanzima ngesikhathi abasebenzi bezwakalisa ulaka lwabo befuna izikhulu ezithize ziphume zizothatha izikhalo.